ညတစ်ည၏ မျက်နှာတစ်ခု ဖျက်ဆီးခြင်း။ | PoemsCorner
ညတစ်ည၏ မျက်နှာတစ်ခု ဖျက်ဆီးခြင်း။
သုတ်ခနဲတိုက်လိုက်တဲ့ လေပြေရနံ့ကို ညအေးအေးရဲ့ ရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ သုတ်လိမ်းလိုက်တော့ လူချေတိတ် ညသန်းခေါင်ရဲ့
အဓိပ္ပါယ်က ပိုမိုသိမ်မွေ့ ညင်သာစွာနဲ့ အတွေးများစွာကို ဆင့်ခေါ်ဖို့ လောကပေါ် လျှောတိုက်ကျလာပါတယ်..။
ဖော်ကွာဝေးတမ်းချင်း တစ်ပုဒ်ကို ညည်းငြူသီကျွေးရင်း ညတွေရဲ့ မူပြတွေအောက်မှာ ရှင်သန်ရဲခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မယုံရဲ စိတ်တွေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ……. အဖြေမဲ့ပုစ္ဆာတွေရဲ့ နရီစည်းချက်သံတွေက ဦးနှောက်ရဲ့ အသိတရားတွေကို ပိတ်ဖုံးစေခဲ့လို့လာပါတယ်…။
ကောင်းကင်က ဖြာကျနေတဲ့ လကွေးကွေးလေးရဲ့ အလင်းအောက်မှာ ….ဟိုး,,,,,,,,,,,,,,မမြင်နိုင်တဲ့မျက်ဝန်းအဆုံး အမှောင်ထုထဲ ကို တရှိုက်မက်မက် လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ မြင်မြင်လေရာဟာ ကိုယ့်ကိုသရော်နေသလို ထင်မိလာပြန်တယ်..။
ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘ၀နဲ့ရာသီတွေကို ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ လောက၀င်္ကပါ ထဲကနေ သိလာတဲ့ အမှတ်တရားတွေနဲ့ ကြုံသလို ဖြတ်တိုးဝင်ရပါ များလာတော့ တစ်ခါတစ်လေ ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ကိုယ့်ခရီးတွေကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မိရင် ဘာကိုကိုင်ဆွဲပြီး ကိုယ်ဟာ ဒီခရီးရောက်အောင် လာခဲ့မှန်း မသိလောက်အောင် တွေဝေချင်စရာ ကောင်းလွန်းနေခဲ့ပါတယ် ။
လောကမှာနေတတ်ဖို့အတွက် တွေ့လာသမျှ ပညာတွေနဲ့ အသိတရားတွေကို ရှာဖွေစုစောင်းခဲ့ စုစောင်းခဲ့…ပုံသေထား ဖြေရှင်း
လို့မရတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ ရှင်သန်နေရသော ကာလတစ်လျှောက်မှာ တွေ့လာဖန်များလာတော့ အရာရာကို မယုံရဲတော့တဲ့ မူမမှန်
စိတ်ဓါတ်တွေဟာ ရင်တစ်ခုလုံးမှာ ဗြောင်းဆန်အောင် တပြန်ပြန်တလဲလဲ ဖြစ်တည်လို့လာပါတယ်..။
ဘ၀မှာ ကိုယ်ကောင်းသလောက် ကိုယ်အပေါ် မကောင်းခဲ့တဲ့မျက်နှာတွေကို ဘာသိဘာသာထားခဲ့ရတယ်..။
ဘ၀မှာ ကိုယ်နားလည်မှုပေးထားပါလျှက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ကိုယ့်ကို နားလည်မှုမဲ့ခဲ့ကြတဲ့ ပြန်တမ်းမဲ့ စကားသံတွေကို လက်ခံခဲ့
တယ် ။ ယုံကြည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကိုးစားမှုတွေကို မရေမရာ မာနတရားတွေအတွက် အလောသုံးဆယ်ဖြိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်..။
ဒါတောင် သူတို့က မကျေနပ်လေရော့သလား……။
ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ တပ်မက်လွန်းသော စည်းစိမ်တွေရဖို့ အတွက် ကိုယ်ခံယူထားတဲ့ အသိတရားတွေနဲ့ လဲလှယ်ပေးခဲ့တယ်..။
နားမလည်နိုင်လွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အသိမဲ့စွာ ဖော်ကျူးတတ်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အသိမဲ့မှုအောက်မှာ သည်းခံခြင်းတွေနဲ့ပျော်ဝင်
ဘ၀နဲမာနကို နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ယုံကြည်စွာတည်ဆောက်ချင်ခဲ့တဲ့ လက်ဖ၀ါးနုနုလေးကို မမြဲခြင်းအနိစ္စတရား အတွက်
ဒါတောင် သူတို့ လက်မလျော့သေးဘူးထင်..။
အဆုံးရဲ့ အဆုံးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ နာရီတွေရဲ့ ပုံဖော်မှုကို မသိချင်ပါဘူး ။
ပြစားခံပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ ထည်ဝါမှုတွေကိုလဲ မလိုချင်ပါဘူး..။
ဘ၀တွေကို ဖြန့်ခင်းပြီးသွားရတဲ့ လမ်းတစ်ဘက်က နန်းဦးဆောင်ဆီလဲ မရောက်ချင်ပါဘူး ။
စကားလုံးတွေကို ကိုယ် သိသလောက်လေးနဲ့ တိုင်းတာတတ်တဲ့ ပေတံတစ်ချောင်းလဲ မရှိချင်ပါဘူး…။
တကယ်လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ ရင်ထဲမှာ မက်မက်စက်စက်ကို ရှိနေ၊ ချဉ်ခြင်း တပ်နေတာကို ၀န်ခံချင်ပါတယ်..။
ဖြတ်သန်းရဦးမယ့် ဘယ် မှာဆုံးမယ်မှန်းမသိတဲ့ လမ်းတစ်ခု အတွက် တကယ်ကို ဒီတစ်ခုပဲ လိုချင်ပါတော့တယ်..။
ဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပြန်လည်စတင်ခွင့်ဆိုတဲ့ မျက်နှာဖုံးအသစ်တစ်ခုပေါ့ ….ဟောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကြီးကို ခွာပြီး
ပြန်လည်ကပ်နိုင်မယ့် အရိုးသားဆုံး မျက်နှာတစ်ခုပေါ့..။
မဝေးတော့တဲ့ ကျွန်တော့် အဆုံးသတ်အတွက် အေးချမ်းမှု များစွာ တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိမယ့် မျက်နှာတစ်ခုပေါ့..။
ဘယ်သူမှ အနားမှာ တီးတိုးဖော်အဖြစ် မဆုတ်မနစ် လာရပ်တည်ပေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး..။
သေချာပါတယ်…. နောက်လာမယ့် အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော် မုန်းတဲ့မျက်နှာတွေကို ဒီမျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်တတ်
ဒါကြောင့်…… ဒီည အတွက်လည်း ကျွန်တော့်မျက်နှာထက်က မျက်နှာဖုံးဟောင်းကို လက်လွှတ်ဖို့ အရင်ညတွေလိုပဲ တွယ်တာမှု
တွေကြားက ထပ်ခါ ကျွန်တော် ကြိုးစားရပြန်ဦးမယ်…။
ဒါပေမယ့် …..ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ………….။
ကကြီး။(၁၀.၁.၂၀၁၂) 00;35 am
In: စကားပြေ Posted By: kyagee13 Date: Jan 10, 2014
ကြိုးတပ်ခြင်း နိယာမနှင့် အလှကွန်ယက် စွန်ငယ်တစ်ခု – နရီထက်
တဖက်သတ်ဆန် ငါ့ရင်ထဲက ဖြစ်ခြင်း… ရှိခြင်း
Leave comment No comment & 517 views